Mitsipaka Ny ‘Tsia’ Ny Vondrom-piarahamonina Indizeny, Ny Mpianatra Ary Ny Afrikanina ao Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2016 5:01 GMT
Vondrom-piarahamonina vazimba teratany sy Afro-Kolombiana nankao Bogota mba hanohana ny fihetsiketsehana mankatoa ny fifanekem-pihavanana tamin'ny fitsapan-kevibahoaka notontosaina tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra. Sary nalain'ny mpanoratra ary nahazoana alalana.
Tsy zava-drehetra fa-tsy fiafaran'ny adihevitra [mg] ny fandresen'ny “Tsia” tamin'ny fitsapan-kevibahoaka tao Kolombia momba ny fifanekem-pihavanana amin'ny FARC (Tafika Revolisionera ao Kolombia—Tafi-bahoaka). Natao tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra ny fitsapankevi-bahoaka taorian'ny fampielezan-kevitra mafonja mampiroborobo ny dingana ho an'ny fihavanana ( “Eny”) na mitsipaka ny fifanarahana ( “Tsia”) nampizarazara ny firenena, ary mbola fakafakaina sy ifandroritana ny valim-pifidianana.
Natao hanamarika ny fiafaran'ny ady mitam-piadiana naharitra 50 taona mahery teo amin'ny governemantan'i Kolombia sy ny FARC ny fifanarahana. Notontosaina tao Havana ny fifampiraharahana ary nanokatra fifanarahana nosoniavin'ny roa tonta, saingy resy tamin'ny fitsapan-kevibahoaka tamin'ny farany izay latsaky ny 1% ny elanelam-bato nandresen'ny “Tsia”.
Na dia teo aza izany, nidina teny an-dalamben'ny renivohitra, Bogota ny vondrona teratany sy vondrom-piarahamonina hafa niaro ny fifanekem-pihavanana tamin'ny 12 Oktobra mba hitaky fanajana ny fifanarahana. Maro tamin'izy ireo no avy amin'ny faritra samihafa, izay niharan'ny ady mitam-piadiana indrindra ny sasany.
Sary: Ana Luisa González, nahazoana alalana.
Anisan'ireo vondrona ireo ny vehivavy avy ao amin'ny vondrona teratany Embera Katío manao fehivozona mavo, akanjo marevaka ary mitondra voninkazo fotsy.
Iray amin'ireo olona teratany i Maribel Domicó tonga avy any amin'ny faritra Karaiba mba hanao diabe ho amin'ny fandriampahalemana:
Avelao hisy ny fihavanana ary tsy mila herisetra intsony, tsy mila famindran-toerana ary tsy hisy ankizy kamboty sy mpitondra-tena intsony satria ankizy amam-behivavy ireo tena mijaly
Tsy ity ihany no hetsi-panoherana ao Kolombia izay manohana ny fifanaraham-pihavanana, Misy ihany koa ireo hafa nisongadina tany amin'ny tanàna samihafa manerana ny firenena tahaka an'i Cali, Cartagena sy Medellín. Ny tanjona dia ny hanery ny mpanao politika mba hanohana ny fampitsaharana ny ady eo amin'ny miaramila sy ny mpiady anaty akata ary hanasonia fifanaraham-pihavanana vaovao tsy ho ela.
Hoy ny sora-baventy: “Ny taratasy tsirairay ao amin'ny fifanarahana [fihavanana] dia maneho ireo taonan'ny tolona.” Sary avy amin'i Ana Luisa González, nahazoana alalana.
Saingy goavana ny diabe tamin'ny 12 Oktobra tao Bogota, antsoina hoe “Diaben'ny Voninkazo”. Olona indizeny sy Afro-Kolombiana teo amin'ny 7.000 avy amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena no nanao fihetsiketsehana miaraka amin'ny mpianatra, mitaky amin'ireo anaty rafitra ara-politika mba hiara-hiasa amin'ny fitadiavam-bahaolana haingana.
Avy ao Chocó, rantsan'ny fikambanana “Afroindígena mi Colombia” (Ny Kolombia-ko Afro-Indizeny) i Elizabeth Andrade. Chocó dia faritra lasibatry ny FARC mafy dia mafy. Hoy izy:
Manao diabe ho an'ireo mpiray tampo amiko, ho an'ny tanora sy ny rehetra aho androany. Izaho dia milaza amin'ny fanjakana fa ny fifanaraham-pihavanana nosoniavina, dia fifanarahana tsy maintsy hajaina
Fihetsiketsehana ao Bogota. Sary avy amin'i Ana Luisa González, nahazoana alalana.
Olona an'arivony manao akanjo fotsy, mitondra voninkazo sy mihiakao hoe “Tsy irery ianao” no niandry hitsena ny diabe satria tonga tao afovoan-tanànan'i Bogota akaikin'ny Plaza de Bolivar ny diabe. Anisan'ny ao anatin'ny fikambanana Rebeldía Estudiantil (Fikomian'ny Mpianatra) i Daniel Ortega, mpianatra mpikatroka, avy ao amin'ny Oniversitem-Pirenen'i Kolombia, izay nitarika ireo mpianatra avy amin'ny sekoly samihafa mba hanatevin-daharana ny diabe:
Amin'izao andro mikorontana ao amin'ny firenena izao, efa niezaka niantso ny mpianatra sy ny [vondrona hafa] izahay mba hanorina fihavanana ao amin'ny sehatra malaza samihafa mba hanatevin-daharana ity antsoantso ity ary hanorina tetezamita [mba] hananganana fiarahamonina demokratika
Mpanao fihetsiketsehana mihanika ny sarivongan'i Simon Bolivar, mahery fon'ny firenena ao Kolombia. Sary avy amin'i Ana Luisa González, nahazoana alalana.
Nitatitra momba ireo fanentanana ireo ny mpanao gazety sy haino aman-jery iraisampirenena, mahafantatra ity teritery ity ny Filoha Juan Manuel Santos. Ny ampitson'ny fihetsiketsehana, nisioka ny filoham-pirenena hoe:
Tsy hilavo lefona aho hahatanteraka ny faniriana sy ny antsoantson'ny Kolombiana rehetra. Tsy hivadika amin'ny fanantenana hisian'ny fihavanana aho.